एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै ! – radiokaski.com एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै ! – radiokaski.com
एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै !
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिसं २०७६ सालको एसईईको नतिजाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । बोर्डको बैठकले सोमबार दिउँसो बिद्यार्थीको परीक्षाफल प्रमाणित गरेको जनाएको छ ।
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार बैठक सकिएपछि एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।
परीक्षााफल प्रकाशित भएपनि १५ गतेसम्म भर्ना गर्न पाइनेछैन । सरकारको निर्नेशन पालना नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइले कारबाही गर्नेछ । त्यस्तै त्रुटी सच्याउन व्द्यिार्थीलाई पनिका आउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको । विद्यार्थीले ३५ दिनभित्र फारम भरेर इकाइमा बुझाएपछि इकाइलेनै त्रुटी सच्याएर विद्यालयमा पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ ।